P.S. I Love You – Gold Channel Movies
His life ended. Now,anew one will begin.Nov. 15, 2007USA126 Min.PG-13
P.S I Love You (2007) မြန်မာစာတမ်းထိုး
GC ပရိတ်​သတ်​ကြီးအတွက်​​တော့ဒီတစ်​ခါက​ အချစ်​ကား​လေး​ပေါ့ဗျာ……
ဒါ​ကြောင့်​ ရုပ်​ရှင်​ကြည့်​ရတာကိုကြိုက်ပာတယ်​​ဆိုတဲ့အကိုတို့အမတို့​ကော “အချစ်​ဆိုတဲ့အရာကို​ရော ခံစားဘူးကြလား….?”
အချစ်​ဆိုတဲ့အရာက အလွန်​တစ်​ရာမှဆန်းကြယ်​လွန်းတယ်​ထင်​ပါတယ်​ တစ်​ခါတ​လေ မြင်​မြင်​ခြင်း တန်းတန်းစွဲချစ်​မိသွားတာမျိုး တစ်​ခါတ​လေကျ​တော့ တစ်​ဖက်​ဆန်​တဲ့အချစ်​​တွေ ​ကြောင့်​ ပရိတ်​သတ်​ကြီးတို့ရူးရူးမှူးမှူးဖြစ်​သွားကြတာမျိုး….
ဒါ​ပေမဲ့ အားလုံးတူတဲ့အရာ ကိုယ်​ချစ်​ခင်​စုံမက်​တဲ့ ကိုယ့်​ရဲ့ချစ်​သူ​ကောင်​​လေး/​ကောင်​မ​လေး တစ်​​ယောက်​​ယောက်​ မထင်​မှတ်​ပဲ ဆုံးရူံးလိုက်​ရတဲ့အခါ (​သေကွဲကွဲတာလဲရှိသလို၊ရှင်​ကွဲကွဲတာ​တွေလဲ) ရှိနိုင်​ပါတယ်​။ အဲ့ဒီအခာဆိုရင် ​ပရိတ်​သတ်​ကြီး​ကော ဘယ်​လိုခံစားရမလဲ …ဆုံးရူံးသွားရတဲ့ကိုယ့်​ချစ်​သူအတွက်​ ဝမ်းနည်းပူ​ဆွေးရင်းနဲ့ပဲ ဘဝကို​ရှေ့ဆက်​သွားမှာလား ဒါမှမဟုတ်​​နောက်​ထပ်​အချစ်​အသစ်​တစ်​ခုကို လိုက်​ရှာ​တော့မှာလား….??
ဒီရုပ်​ရှင်​ကား​လေးက ​ပေးခြင်​တဲ့ မက်​​ဆေ့က​တော့ ကိုယ့်​အနီးနားမှာကိုယ်​ချစ်​​နေရတဲ့သူကို ရှိ​နေတုန်း​လေးကျင်​နာပါယုရပါ စိတ်​သ​ဘောထား​လေးကြီး​ပေးပါ…ကိုယ့်​​ဘေးနားက ရုတ်​တရက်​ထွက်​သွားလိုက်​ရင်​ ကိုယ်​ဘာမှလုပ်​​ပေးနိုင်​​တော့မှာမဟုတ်​ဘူး​လေ……..
ဒီဇာတ်​ကား​လေးက ဒရမ်​မာဆန်​ဆန်​ အချစ်​ဟာသဇာတ်​မြူး​လေးဖြစ်​လို့ ရီရီ​မော​မော​လေးနဲ့ကြည်​ရူရမှာပါ။ ဒါ​ပေမဲ့ ဒီဇာတ်​ကား​လေးထဲမှာ ဂျယ်​ရီ နဲ့ ​ဟော်​လီက အရမ်းချစ်​ကြတဲ့ ဇနီး​မောင်​နှံ(၂)​ယောက်​​ပေါ့….​ဟော်​လီက တစ်​ဖက်​သက်​တစ်​ခါတ​လေကျရင်​ဆန်​တယ်​..ဂျယ်​ရီက​တော့ သူ့ဇနီးကိုအလိုလိုက်​ရင်းနဲ့ပဲ တစ်​​နေ့မှာ​တော့ ဂျယ်​ရီက ရုတ်​တရက်​ကြီးဆိုသလို ​ရောဂါတစ်​ခု​ကြောင့်​ ​သေဆုံးသွားခဲ့တယ်​…ဂျယ်​ရီ ​သေဆုံးသွားတာ​တောင်​ သူ့ဇနီး​ဟော်​လီ အထီးကျန်​ ပြီးတစ်​​ယောက်​ထဲဖြစ်​​နေမှာစိုးလို့ဆိုပြီး စာအိတ်​​လေး​တွေကိုသူ မ​သေဆုံးခင်​ထဲကကြိုတင်​ကြံစည်​ပြီး ပြုလုပ်​ထားခဲ့တယ်​…ဒါ​ကြောင့်​ ​ဟော်​လီမှာ စိတ်​သက်​သာရာရလာတာ​ပေါ့…ဒါ​ပေမဲ့ ဂျယ်​ရီရဲ့စာအိတ်​​လေး​တွေ​ကြောင့်​သူမဘယ်​​လောက်​ထိ​ပျှော်​ရွှင်​ရအုန်းမလဲ…
​ဟော်​လီအတွက်​​ ​သေဆုံးသွားတဲ့ဂျယ်​ရီက တမလွန်​က​နေ ဘယ်​​လောက်​ထိ အ​ရေးပါလွန်းတဲ့ သူ့ဘဝရဲ့လက်​ကျန်​အချိန်​​တွေကိုဘယ်​လိုဖြတ်​သန်းခိုင်းမလဲ….?
ဂျယ်​ရီက မ​သေဆုံးခင်​ ​ဟော်​လီအတွက်​ဘယ်​​လောက်​​တောင်​အရာရာကို ကြိုတင်​ပြင်​ဆင်​​ပေးခဲ့​သေးလဲ…? စတဲ့အရာ​တွေအားလုံးကိုဒီဇာတ်​ကား​လေးထဲမှာ ရသအပြည့်​အစုံနဲ့ကြည့်​ရူရမှာပါ…
ဒီဇာတ်​ကား​လေးကြည့်​ပြီးရင်​​တော့ ရင်​ထဲမှာ တစ်​ခုခုကျန်​ခဲ့မယ်​လို့​တော့ထင်​ပါတယ်​။
Translated by Aung Htet Htet
Reviewed by Aung Htet Htet
IMDB > 7.1
Genre > Drama / Romance
Run Time >2H 6min
Size > 910MB / 355MB
IMDb Rating 7.1 190,159 votes
TMDb Rating 7.1 1,826 votes
Download One drive SD မြန်မာ 355mb 904months gcmovies
Download One drive HD မြန်မာ 910mb 1084months gcmovies
Download Mediafire SD မြန်မာ 355mb 804months gcmovies
Download Mediafire HD မြန်မာ 910mb 1584months gcmovies
Download Openload SD မြန်မာ 355mb 2174months gcmovies
Download Openload HD မြန်မာ 910mb 6494months gcmovies
Mon monMarch 16, 2019Reply